सो’तीगाउँ ह’त्याका’ण्ड: सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीशबीच राय बाझियो, अब के हुन्छ ? – Rapti Khabar
असोज २६, काठमाडौं/सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको सो’तीगा’उँमा ६ जनाको ज्या’न जाने गरी भएको ह’त्याका’ण्डमा मु’छिए’काहरूलाई थु’नामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । उनीहरूबीच घटनामा मु’छिएकी एक किशोरीलाई छाड्ने विषयमा मात्रै मत मिलेको छ ।
राय बाझिएको विषय निरूपणका लागि सुर्खेत उच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पेस हुनेछ । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको विषय भने तेस्रो न्यायाधीशको राय नआउन्जेल कार्यान्वयन हुँदैन । यो खबर कृष्ण ज्ञवाली र कलेन्द्र सेजुवालले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन ।
रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले घट’नामा मु’छिएका ३४ मध्ये २५ जनालाई पु’र्पक्ष थु’नामा पठाएको थियो । दुई नाबालकलाई यसअघि नै बा’लसु’धार गृ’हमा पठाउन आदेश भएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशवि’रुद्ध आ’रोपितहरू उच्च अदालत गएका थिए ।
आ’रो’पितहरूको निवेदन सुनुवाइका क्रममा मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टबीच राय बाझिएको हो । तीमध्ये मृ’तक नव’राज वि’कसँग नाम जोडिएकी किशोरीलाई थु’नामा नभई साधारण तारे’खमा छा’ड्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको हो ।
के यो मूल मुद्दा हो ?
अहिले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुगेको विषय मूल मुद्दा होइन । सा’मू’हिक ह’त्याको आ’रोप लागेकावि’रुद्धको मु’द्दा रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ । उनीहरूलाई थु’नामै राखेर मु’द्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनी गरिएको आदेशवि’रुद्ध मात्रै आ’रोपितहरू उच्च अदालत पुगेका हुन् । अनि केही आ’रोपि’तलाई छाड्ने आदेशविरु’द्ध सरकारी वकिलले पनि उच्च अदालत सु’र्खेतमा निवेदन दिएको छ ।
यो मु’द्दामा तेस्रो न्यायाधीशको समेत राय आएपछि आ’रो’पितलाई थु’नामै राख्ने, ध’रौटीमा छा’ड्ने वा साधारण तारिखमा रि’हा गर्नेमध्ये एउटा आदेश हुनेछ । त्यो आदेशसमेत चित्त नबुझे सम्ब’द्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउनेछ । सर्वोच्चले समेत सुनुवाइ गरेपछि थु’नछे’कको आदेश अन्तिम भएर बस्छ । त्यसपछि जिल्ला अदालत रुकुममा विचा’राधीन ज्या’नमु’द्दाको सुनुवाइ अघि बढ्छ । तर जिल्लामा विचाराधीन मु’द्दा अघि बढाउन भने अहिलेको यो प्रक्रियाले कुनै असर गर्दैन ।
केमा राय बाझियो ?
सुर्खेत उच्च अदालतका रजिस्ट्रार माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार राय बाझिएको विषयमा तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष मु’द्दा पेस हुनेछ । उनले दिने राय निर्णायक भई कार्यान्वयनमा आउनेछ । आइतबार मध्यरातमा मात्रै आदेश तयार भएकाले को/को व्यक्ति’लाई छाड्ने/नछाड्ने हो भन्नेबारे आफूलाई सम्झना नभएको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘बिहान कार्यालय खुलेपछि मात्रै मैले थप भन्न सक्छु ।’
रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतले गत असारमा घट’नामा जोडिएकी किशोरीकी आमालाई मात्रै एक लाख रुपैयाँ ध’रौटी मागेको थियो । तीन जनालाई साधारण तारे’खमा छाड्न आदेश दिएको थियो । साधारण तारेखमा छु’ट्ने आ’देश गरिएकामा इन्द्रबहादुर मल्ल, तिलबहादुर मल्ल र दीपेन्द्र चन्द थिए । वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललगायत अरू सबैलाई थु’नाको आ’देश जारी भएको थियो । घट’नामा संलग्न भएको आ’रोप लागेका पाँच जना फ’रार थिए ।